Xubno Kooxda Jwxo-shiil ka Tirsan oo Jijiga Gaadhay – Rasaasa News
Jan 3, 2012 aal la isweydiinayo oo ah Jwxo-shiil, Fadal dheertii kooxda Jwxo-shiil, Firxadka, Jijiga ma tagi doonaa?, oo Jijiga gaadhay iyo jilib cuslustii oo amar laga diiday. Iyo su, Xubno Kooxda Jwxo-shiil ka Tirsan oo Jijiga Gaadhay
Warar hordhac ah oo aan ka helayno Jijiga, ayaa tibaaxaya in ay Jijiga gaadheen xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, xubnahaas oo haatan ku sugan guryaha martida ee dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan magacyada xubnaha, tirada iyo meeqaanka xubnaha iyo waliba meesha ay ka soo kacitimeen midna lama cadayn. Xubnaha waxaa ugu wehelyeelaya goobaha ay joogaan masuuliyiinta ururka ONLF, ee hore nabada u qaatay.
Sida laga soo xigtay xubnaha Jijiga gaadhay, waxaa la filayaa in todobaadyada soo socda xubno iyo taageerayaal tira badan oo kooxda ah, ay soo gaadhi doonaan magaalada Jijiga, kuwaas oo u hilowsan Eheladooda.
Wararku waxay intaas ku darayaan in kooxdu ku guul daraysatay in ay nidaam iyo midnimo ku timaado Jijiga, haatana la sugayo uun qayb ka mid ah.
Sida qorshuhu ahaa, Jwxo-shiil, wuxuu u doonayey in labo nin mid uun uu xilka ku wareejiyo, ka hor inta aan Jijiga la tagin [cadaani iyo Ina Ismaaciil], sidaasna uusan uu kaga amaan helo xasaradihii uu dhawr iyo tobanka sano ku soo dhex jiray.
Sida la sheegayo arimuhu way noqon waayeen sidii loogu talo galay, waxaana la kala noqday labo saf oo ah; Jwxo-shiil, cabdulahi mukhtaar iyo macalin Diirane oo dhinaca ah iyo Ina Ismaaciil, Cadaani iyo Maadeey oo dhinac ah.
Kooxda Ina Ismaaciil, waxay go,aansatay in nabad iyo colaad midna ayna tagin Ethiopia inta ay nool yihiin. Jwxo-shiil iyo inta raacday waxaa hormari doona Jwxo-shiil, oo aan isagu marna diidi karin taladii tolka ee Dubai.
Xubnaha diiday tagida Ethiopia, ayaa aaminsan in Jwxo-shiil, uu waligiiba ahaa khaa,in ujeedo leh. Laakiin ayna eegga waxba ka qaban karin arimahan u cadaaday.
Si kastaba ha ahaatee xubnaha iyo taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, ee buqaha ah ayeyna jirin cid joojin karta, khilaaf iyo midnimo midna. Waxayna ku biiri doonaan xubnaha ururka ONLF, ee nabada hore u qaatay haatana ku sugan magaalada Jijiga.